Ego ole ka m kwesiri iri kwa ubochi ka m ghara ibu ibu? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ego ole ka m kwesiri iri - nzaghachi nye nsogbu a
Ego ole ka m kwesiri iri - nzaghachi nye nsogbu a
Ego ole ka m kwesiri iri kwa ubochi ka m ghara ibu ibu?
Dị ka Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) si kwuo, Daily Value (DV) makacarbsdị gram 300kwa ụbọchịmgbe olena-eri nricalorie 2,000nri(2). Peoplefọdụ ndị na-ebelata ụbọchị hakabuoriri na ebumnuche nkeifelata, na-egbutu ihe dị ka gram 50-150kwa ụbọchị.Apr 2 2020
Mbelata nke carbohydrates na nri gị bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma isi felata. Ọ na-ebelata agụụ gị na-ebute ụfọdụ ụdị ọnwụ ọnwụ na-enweghị akpaghị aka na-enweghị ịgụ kalori ma ọ bụ njikwa akụkụ. Ya mere, ka anyị leba anya na ole carbohydrates ị ga-eri kwa ụbọchị ka ị ghara ibu ibu.
Naanị ịchọrọ ime ka o doo anya na carbohydrates na-efunahụ abụghị naanị ụzọ isi belata, mana ọ dị oke irè, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwalela abụba dị ala ma ọ bụ gbalịa ịgụta calorie ma ị nweghị ihe ịga nke ọma na ịme ka iri nri gị belata carbohydrates. , nke a maara dika nri obere carb. Nke a pụtara na a ga-eji protein na abụba dochie shuga na stachi dị ka achịcha, pasta, osikapa wdg.
Igodo bụ n'ezie protein na-arịwanye elu, nke ga - enyere gị aka iri calorie ole na ole n'ozuzu ya, niile na-enweghị agụụ na afọ ojuju kwa ụbọchị, gbakwunyere na enwere ọtụtụ ihe akaebe ọhụrụ na nri obere carb nwere uru gafere oke ọnwụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ahụike metabolic dị ka ọrịa shuga nke ụdị 2. Ọ dị mma, ka anyị lelee ụkpụrụ nduzi ala dị ala na-emetụta ọtụtụ mmadụ. Ana m ekwu ihe ka ukwuu n'ihi na ị na-eri ezigbo nri carbohydrate N'ezie, mmadụ dabere na afọ ha, jenda, ihe mejupụtara ya na etu ha si arụ ọrụ ugbu a, iri nri ọdịnala na ihe masịrị ha yana ọnọdụ metabolic ha ugbu a.
Ya mere, 100 ka 150 grams nke carbohydrates kwa ụbọchị bụ nke a agafeghị oke carbohydrate oriri. Mgbe anyị na-atụle na nkezi nri nwere ihe karịrị 250 grams kwa ụbọchị. N'ihi ya, ọ dị mma maka ndị na-adịghị ahụkebe, na-arụsi ọrụ ike ma na-anwa ịme ahụ ike ma jigide ibu ha.
Ọ ga-ekwe omume ka ị ghara ibu ibu na nke a na nri carbohydrate ọ bụla, mana ọ nwere ike ịchọ ka ị gụọ calorie ma ọ bụ chịkwaa nri niile nke akwụkwọ nri ị nwere ike iche maka ya, ọtụtụ mkpụrụ osisi kwa ụbọchị, obere ego ma ọ bụghị ọtụtụ nri dị mma dị ka poteto. , poteto dị ụtọ, na ọka dị mma dị ka osikapa na ọka oat. Ọnọdụ dị gburugburu 50 ruo 100 gram nke carbohydrates kwa ụbọchị dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ idalata ngwa ngwa mgbe ị na-agbakwunye obere carbohydrates na nri gị n'otu oge. Ọ bụkwa usoro nlekọta dị ukwuu maka ndị nwere mmetụta dị nro.
Ọ dị mma ka carbohydrates ị nwere ike iri, ọtụtụ inine dị ka akụkụ nke ọzọ, ihe dị ka mkpụrụ osisi abụọ kwa ụbọchị, obere kabohaidụ starch dị ka poteto na abụba na-enweta ntakịrị. Ugbu a ị maara na ụdị carbohydrates a, yana ọbụlagodi na gram 100 na 150, ga-ewepụ ya na nri na nri. Na nri ha, ọ fọrọ nke nta ka ha bụrụ ọka wit a nụchara anụcha ma ọ bụ gbakwunye shuga, ma ọ bụ ha abụọ, nke pụtara ọkwa dị elu nke carbohydrates.
Mana ihe dị mma bụ na ị na-awụfu nri ratụ rahụrụ n'ụzọ gị ka ị belata nri oriri na-edozi ahụ. Ọ dị mma, ugbu a, anyị na-abanye n'ọtụtụ dị obere nke obere 20 nke 50 nke carbohydrates kwa ụbọchị, nke a makwaara dị ka nri ketogenic. Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-erughị gram 50 kwa ụbọchị, ahụ gị ga-abanye na ketosis.
Ike maka ụbụrụ site na ozu ketone nwere mmetụta ahụike metabolic dị ike nke nwere ike ibute ọnwụ dị oke egwu. Ọfọn carbohydrates ị nwere ike iri, ọtụtụ obere akwụkwọ nri carb, enweghị mkpụrụ osisi belụsọ mkpụrụ osisi, nwere ike jikọta ya na ude ka ihe oriri gị ga-aba ụba iji gboo mkpa caloric gị. Nwere ike nweta akara carbohydrates site na nri ndị ọzọ dị ka ube bekee, Nwere mkpụrụ na mkpuru osisi.
Ugbu a carbohydrates mebere obere pasent nke ike oriri gị, oriri gị ga-aba ụba n'ụzọ dị egwu. Ọ dịkwa mkpa ka ị dọọ gị aka ná ntị ịgbaso usoro iri nri a, ma imirikiti ndị mmadụ na-eme ya naanị nwa oge. Nke a na-ewetara m isi okwu na-esote.
Ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ahụike ugbu a ma ọ bụ na ị na-a medicationụ ọgwụ, ọ dị mkpa ka ị gwa dọkịta gị tupu ịmee mgbanwe ọ bụla n'ụdị nri, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nọ na nri nri ketogenic, nke nwere ike inwe mmetụta siri ike na homonụ na akụkụ ndị ọzọ metụtara gị ahụike. Achọrọ m ime ka o doo anya na obere nri nri carbohydrate abụghị ihe ọ bụla gbasara ọnwụ ọnwụ, Gosipụta Ahụike Gị na nke ahụ pụtara na ọ kwesịrị ịdabere na nri ndị anaghị edozi na isi mmalite nke carbohydrates ga-adị na eriri. Cheta, nri ratụ ratụ-carb ka bụ nri ratụ ratụ, ọ dị mma? Ugbu a, ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ka ahụike gị ka mma, họta nri ndị na - adịghị edozi ahụ dịka anụ, azụ, akwa, akwụkwọ nri, akụ, abụba ndị dị mma, na ngwaahịa mmiri ara ehi juru.
Yabụ ugbu a ị nwere ihe niile ịchọrọ iji bido na obere nri carb. Ya mere, cheta na gram 100 ruo 150 zuru oke. Ebe mmalite dị mma, n'etiti 50 na 100 gram dị ezigbo mma maka ọnwụ, na ihe ọ bụla dị n'okpuru gram 50 ka a na-ahụta ka ọ bụ obere carb ma ọ bụ ketogenic nke nwere ike ọ gaghị adabara gị.
Pụrụ ịmalite na gị carbohydrates na appor a. Gụọ ebe nrụọrụ weebụ nke Calculator Nri iji nweta echiche nke ole carbs ị na-eri n'otu ụbọchị, mana n'ikpeazụ ị gaghị agụ carbs ma ọ bụrụ na ịchọghị. Naanị rie ụfọdụ protein nwere abụba siri ike yana ọtụtụ akwụkwọ nri na nri ọ bụla, nwere ike ịtụba ụfọdụ mkpụrụ na abụba zuru oke maka ezigbo ihe, họta usoro anaghị edozi, ọ dị mfe.
Daalụ maka ịgbanye. Ọ bụrụ n’ịchọta na ọ bara uru, kpachara anya ịhapụ isi mkpịsị aka. Ọ bụrụ na ịnweghị, ị nwere ike ịdenye aha na chanel YouTube anyị maka Nutrition Authority site na ịpị bọtịnụ uhie n'okpuru isiokwu ahụ, ị ​​ga-enwe ike ihu akwụkwọ ọhụụ ọhụrụ niile ozugbo ewepụtara ha. (adụ egwu)
Ego ole ka m kwesiri iri na nri obere carb?
Nchịkọta ụbọchị nke 0.7 ruo ounces 2 (gram 20 ruo 57)kabohaidretahụkarị na adị ala-nri carb. Ndị akabohaidretnye calorie 80 ruo 240. Fọdụdị ala-nri carbmachibidocarbsn'oge mmalite nkenrima jiri nwayọọ nwayọọ mụbaa ọnụ ọgụgụ nke ekwecarbs.18 nke 2020bọchị 2020
Enweghị ikike carb kwesịrị ekwesị maka keto. Nke bu eziokwu bu na onye obula nwere ihe ozo di iche nke ha kwesiri ijidesi ike ka ha wee nweta ketosis ma meputa mmeputa nke ketone. Ọ ga-eme ka ihe dị mfe ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu nọmba anwansi ka ịchekwa ma buru n'uche na enwere ọtụtụ ihe nwere ike ịgbanwe ma chọpụta ọnụọgụ ahụ.
N'isiokwu a, anyị ga - enyere gị aka ịchọta azịza ahaziri iche maka ajụjụ a, 'Gịnị bụ oke ketocarb m?' Ka anụ ahụ gị wee nwee ike ịmalite producemepụta ketones ma gbaa abụba, ị ga-agbanwe ụdị nri ị na-eri ka ha wee nwee nnukwu obere carbohydrates. Nke ahụ pụtara izere nri dịka ọka, mkpụrụ osisi, tubers na shuga niile. Kama nke ahụ, a na-elekwasị anya na anụ abụba, mmanụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, akwụkwọ nri na-egbu egbu, na ngwaahịa mmiri ara ehi nwere abụba dị elu, yana akụ na mkpụrụ.
Fruitsfọdụ mkpụrụ osisi, dị ka ube oyibo na mkpụrụ osisi bekee, na ihe ndị na-atọ ụtọ dị ka stevia na erythritol, nwekwara ike ịgụnye na nri, ozugbo anyị tọrọ ntọala ndị ahụ, ka anyị mee ókè carbohydrate. Ọ bụ ezie na njedebe ndị a nwere ike ịgbanwe site na otu onye gaa na onye ọzọ, enwere oke carbohydrate nke ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ike iji nweta ketosis. Nchịkọta a bụ gram iri atọ na ise nke carbohydrates dị mkpụmkpụ na gram 25 nke net carbohydrates.
Cheta, a na-achọta net carbohydrates site na iwepu gram nke eriri site na ngụkọta gram nke carbohydrates. Ọ bụrụ n’ịgaghi abanye na ketosis ma ọ bụ chọọ ịchọta oke nke onwe gị, ị kwesịrị ịmata ihe ndị ọzọ na-eme ka ketosis kwụsị. Onye ọ bụla nwere ike imeghari na ketones na-ere ọkụ maka mmanụ.
N'oge mmegharị ahụ, mkpụrụ ndụ gị na - arụ ọrụ nke ọma na usoro a. Ogologo ahụ gị mara ketones na-ere ọkụ maka mmanụ, ọ nwere ike gbanwee ngwa ngwa gaa ketosis ma e jiri ya tụnyere ịmalite nri nri. Dị ka ego agbakwunyere, ọ bụrụ na agbanwere ahụ gị, ịnwere ike ịgbakwunye ụfọdụ carbohydrates na-anọ ma nọrọ na ketosis.
gịnị mere anụ eji esicha adịghị mma
Anyị na-atụ aro ka ịmalite nwayọ nwayọ n'echiche a wee soro usoro nri keto dịkarịa ala ọnwa 3 ruo 6 tupu ịnwale nri gị na-eri nri. Mkpụrụ ndụ gị na - ewepụta oge iji mepụta g na iji ketones maka ike. Na mgbakwunye na oge ị nọ na ketosis, mmega ahụ, oriri zuru oke, na ahụ erughị ala bụ ihe ndị ọzọ nwere ike imeziwanye ma ọ bụ mebie ike ahụ gị iji gbanwee nri nri ketogenic.
Mmega ahụ bụ ihe dị mkpa iji chọpụta njedebe ịgba carbohydrate gị. Omume siri ike na-enyere shuga ndị a na-echekwa akpọrọ glycogen si akwara gị belata. Iji mebie glycogen echekwara gị, mee 30 ka 60 nkeji nke mmega ahụ siri ike, dị ka ibuli ibu, maka ụbọchị ole na ole ma ọ bụ CrossFit.Make, gbaa mbọ hụ na ị rehydrate emesịa ma were ihe mgbakwunye ịnweta dị mkpa.
Ozugbo glycogen gị gwụsịrị, ị nwere ike iji mgbatị ahụ rụọ ọrụ nkeji iri atọ iji nyere aka gbaa abụba na ketones ume, dị ka ịgagharị ije ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè Maka nsonaazụ dị mma, mee mmega ahụ tupu ị rie. Site n'ịbawanye ogo ọrụ gị na ịme ụdị mmega ahụ n'oge kwesịrị ekwesị, ị nwere ike nweta ketosis ngwa ngwa, gbaa abụba karịa ma melite ahụike gị. Dị ka mmetụta dị mma, ị nwere ike ịbawanye oke carbohydrate kwa ụbọchị n'emeghị ka ọkwa ketone gị belata.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme egwuregwu, ọzụzụ na carbs dị ntakịrị nuanced, yabụ gbaa mbọ hụ na ị ga - achọpụta ihe omimi miri emi na Ruled.me nke akpọrọ How How Find Find Your Carbohydrate Limit On The Ketogenic Diet. Buru n’uche na imega ahụ gabiga ókè nwere ike ime ka ị nwekwuo nrụgide n’ahụ ma metụta ikike i nwere ịnọ na ketosis.
Nchegbu bụ ihe ọzọ na-ekpebi oke ịgba carbohydrate gị. Homonụ metụtara nrụgide dị ka cortisol na-ebuli ogo shuga shuga gị ma nwee ike belata mmepụta ketone. Enweghị ike izere nrụgide site n'oge ruo n'oge, ma ezigbo nsogbu na-abịa ụbọchị niile, nrụgide kwa ụbọchị.
Iningtụgharị uche, iri nri na-ezughị oke, ilekwasị anya na mmejọ, ichegbu onwe gị maka ọdịnihu, na ịrụ ọrụ na-enweghị nkwụsị na-enweghị nkwụsị bụ ihe na-akpata nrụgide ụbọchị niile. Ihe nrụgide ndị a niile nwere ike ibute ogo shuga dị elu ma gbochie gị ịhapụ abụba ma ọ bụ jigide oke ahụ. Nrụgide na-achịkwa.
Ndị a na-agụnye àgwà iri nri dị mma na-agbanwe agbanwe, na-eme ka ụra dịkwuo mma site na iwepụ anyanwụ, dochie ụfọdụ mmega ahụ dị elu na nhọrọ ndị dị ala, na ntụgharị uche oge ụfọdụ na ọkwa miri emi nke ketosis. Na nri nri ketogenic, ihe dị ka 25% nke calorie gị kwesịrị ịpụta site na protein. Mgbe oriri protein riri oke oke, ahụ mmadụ na - amino acid nke na - ewepu insulin.
Insulin na-ezigara sel ozi na ike zuru ezu sitere na amino acid na ha na-akwụsị imepụta ma na-ere ketones. Iji chọpụta ókè protein dị mma maka gị, lelee Calculator Keto Ruled.me.
N’iburu ihe ndị a nile n’uche, ịnwere ike ịnwale oke nke kedohaydroped gị n’onwe gị. Anyị hụrụ na nke a bụ ụzọ kachasị mma iji gbakwunye naanị gram 5 nke carbohydrates dị mgbagwoju anya site na akwụkwọ nri ma ọ bụ mkpụrụ osisi obere carb kwa ụbọchị ruo mgbe ị hụrụ nkedo na ọkwa ketone gị ma lelee carbohydrates gị ruo mgbe ketones gị laghachi na ị ga - ahụ oke carb gị . Iji mee ka ketones gị mara nke ọma, jide n'aka na ị ga-eji mita ketone ọbara ma tụọ ketones gị n'otu oge kwa ụbọchị maka eriri mmamịrị n'ihi na ha ezughị oke maka nsonaazụ a pụrụ ịdabere na ya.
Ebumnuche bụ iji nwayọọ nwayọọ mụbaa carbohydrates ị na-eri mgbe ị na-ejikwa ketosis dị ala ma ọ bụ dị ala. Nke a ga-adị ihe dịka mita 1.5 maka ketone gị.
Oge ị nọ na ketosis, omume mmega ahụ, nrụgide nrụgide, na nri protein na-emetụta oke nke kredit carbohydrate gị. Ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a nwere ikike ịbawanye ma ọ bụ belata ọnụọgụ carbohydrate kwa ụbọchị. Nwere ike ịnwale onwe gị, ma ọ bụ nọrọ n'okpuru 35 gram nke mkpokọta carbohydrates iji debe gị na ketosis n'agbanyeghị ihe.
Lelee Ruled.me mgbe niile maka ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nri keto. Anyị nwere ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ, atụmatụ na-edozi ahụ, usoro nri, akụkọ na-enye nkọwa, akụkọ ịga nke ọma na ọtụtụ ihe iji nyere gị aka na njem gị!
Carbs 100 bu obere ala carb kwa ubochi?
Ọ bụ ezie na enweghị nkọwa doro anya nke adị ala-kabunri, ihe ọ bụla dị n'okpuru100–150 grams kwaụbọchịa na-atụlekarịdị ala-kabu. Ọnụ ego a pere ezigbo mpe karịa ka ọ dị na nri ndị Western. May nwere ike nweta nsonaazụ dị ukwuu n'ime nke akabuiche, ma ọ bụrụhaala na ị na-eri nri na-enweghị nri, ezigbo nri.
Kedu ka m ga-esi gbakọọ ihe oriri carb m?
Na-eme atụmatụnetcarbsbụ otu ụzọ isi mee nke a. Okwu ahụ bụ “ụgbụcarbs”Na-ezo akacarbsahụ na-etinye obi gị dum. Ijigbakọọụgbụcarbske ofụri oriri, wepụ eriri si ngụkọta ọnụ ọgụgụ nkecarbs. Ijigbakọọụgbụcarbsna nri esichara, wepu eriri na otu akụkụ nke mmanya na-egbu shuga.Ọnwa Ise 10, 2017
Ndewo, ma nabata ụdị ọrịa shuga Typedị nke 1. Taa, anyị ga-eleba anya n'ihe na ịgụta carbohydrate na etu esi etinye insulin nke ọma dabere na ole carbohydrates dị na nri. Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga nke ụdị 1, ị ga-enyerịrị insulin tupu ị rie ka ahụ gị nwee ike iji ike nri.
Ma olee otu i si mara ole insulin na-enye? N’ezie, obere apụl anaghị achọ insulin otu ihe ka ogbe achịcha buru ibu. Iji chọpụta ókè insulin na-eri, ịkwesịrị ịma ole gram nke carbohydrates dị na nri ị na-eri. Easiestzọ kachasị mfe iji chọta nke a bụ n'akwụkwọ nri na-edozi ahụ n'azụ ọtụtụ nri.
Anyị ga-ekwu maka otu esi achọpụta ego nke carbohydrates na nri na-enweghị ozi gbasara nri n'oge na-adịghị anya. Enwere ihe ole na ole ịchọrọ ile anya na tebụl anyị na-edozi ahụ iji nyere gị aka ịchọpụta ọtụtụ gram carbohydrates dị na nri. Mbụ, ị kwesịrị ị na-ele anya na serving size.
Odi otu ahu ichoro iri? Otu n'ime ụzọ kachasị mfe isi gụọ carbs bụ ịghara ịma oke ọrụ. Fọdụ nri ndị dị ka ha kwesiri inwe naanị otu ugboro nwere ike ịnwe abụọ ma ọ bụ karịa, nke nwere ike ịba okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ karịa nke carbohydrates ị na-eri. Ugbu a na ịmara ihe oke ibu bụ, ihe ọzọ ị ga-ele anya bụ carbohydrates niile.
Yabụ ugbu a ị maara ole carbohydrates dị na nri. Ọ dịka ọ gwụla, mana enwere nọmba ole na ole ị ga-atụle. Legharịa anya ma hụ ma e nwere eriri ọ bụla.
Fiber bụ ụdị carbohydrate nke ahụ gị na-enweghị ike ịbanye, yabụ ọ naghị emetụta shuga shuga gị. Wepu gram nke fiber site na gram nile nke carbohydrates. Ọzọkwa, chọọ shuga mmanya na-egbu egbu.
ọgwụgwọ anụ ahụ maka ikpere
Ndị a na-esiri ahụ gị ike igwu, ma ọ naghị esiri ike igwu dị ka eriri. Wepụ 1/2 gram mmanya na-aba n'anya site na mkpokọta carbohydrates. Ya mere, ka anyị nwaa ya! Cheta usoro ọgụgụ carbohydrate.
Enwere gram 37 nke ngụkọta carbohydrates, mwepu gram 4 nke fiber, mwepu 10 kewara abụọ ma ọ bụ 5, gram mmanya na-egbu egbu na-eme gram 28. Nọmba mgbe ị wepụsịrị eriri na ọkara mmanya na-egbu shuga a na-akpọ netwọkụl net. Nke a bụ nọmba ị ga - eji mgbe ị na - achọ insulin.
Ugbu a na anyị maara otu esi achọta carbs net sitere na ozi gbasara nri, ka anyị mee mgbatị ole na ole. Lee anya na nri oriri na ọ nutritionụ workụ ma rụọ ọrụ ole carbohydrates nri dị na ya. Anyị ga-egosi azịza ya mgbe ihe dị ka sekọnd iri, mana nweere onwe ịkwụsịtụ isiokwu ahụ ka ị nwekwuo oge maka ịgbakọ.
Ya mere ịgụta carbohydrates dị mfe, ọ bụghị ya? Ma olee otu ị ga - esi chọpụta ihe oriri na nri na - enweghị nri na - edozi ahụ dịka ngwaahịa ma ọ bụ usoro esi arụ ụlọ? Hasntanetị nwere ọtụtụ ihe nwere ike inyere gị aka ịgụta carbohydrates na nri ndị na-edeghị na ozi gbasara nri. Ndị a bụ ụfọdụ ihe bara uru maka ịgbakọ carbohydrates na nri na-enweghị ozi na-edozi ahụ. Ugbu a na ịmara otu esi achọpụta netwọ carbohydrates dị na nri, ọ bụ oge iji ọgwụ insulin zụọ.
Ma ego ole? Know mara ole carbohydrates dị na nri, mana kedu ka ị ga-esi sụgharịa nke ahụ na insulin nkeji? Ọ dị ezigbo mfe. Dọkịta gị nwere ike inye gị ihe a na-akpọ carbohydrate ma ọ bụ insulin ratio. Nke a bụ ihe ruru gị nke na - agwa gị mkpụrụ insulin ole ị ga - enye maka ọnụọgụgụ nke carbohydrates.
Otu ihe atụ nke mkpụrụ osisi carbohydrate nwere ike ịbụ otu insulin kwa nkeji 10 ma ọ bụ 1 gbakwunye na carbohydrates iri asaa. Onu ogugu nke ichoro gha adi dabere na ibu gi, aru oru gi na ogologo oge ichoro oria shuga. Ugbu a na anyị maara etu esi agụta carbohydrates wee gbanwee ọnụọgụ ahụ na insulin nkeji, lee ọrụ ole na ole ndị ọzọ iji nyere gị aka ịma nka a.
Gụkọta carbohydrates nwere ike ịbụ ntakịrị aghụghọ site na ọnụọgụ dị iche iche icheta na ọ ga - abụrịrị ihie ụzọ, mana ka ị na - eme ya ọ ga - adịkwu mfe ma n'oge na - adịghị anya ị ga - aghọrọ ọkachamara n’ịgụ.
Kedu carbs m kwesiri izere ida abụba afọ?
Naanị izere nụchara anụchacarbs- dị ka shuga, swiiti, na achịcha ọcha -kwesịrịzuru oke, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-edozi protein gị nke ọma. Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ bụidaibu ngwa ngwa, ụfọdụ ndị mmadụbelatanke hakabuoriri 50 grams kwa ụbọchị.03/17/2020
Ọ ka mma ịgụta calorie ma ọ bụ carbs?
N'ihi na ọnwụ ọnwụ, ọnụ ọgụgụ nkekaloriị nara ewere ga pere mpe karịakaloriị na-akpọ ọkụ n’ụbọchị. Mgbe ọ bịaracarbs, i tosirigụọọnụ ọgụgụ nke netcarbs, nke enwetara site na iwepu eriri site na ngụkọtacarbskwa otu. Ugbu a iji kwuo nke otu n'ime ndị a bụmma, anyị agaghị ekwu nke ọ bụla.18.09.2020
Ego ole ka ị kwesiri iri otu ụbọchị?
Ntuziaka nduzi nri nke ndị America na-atụ aro nke ahụkabohaidretmee ka pasent 45 ruo 65 nke calorie gị kwa ụbọchị. Yabụ, ọ bụrụgịnweta calorie 2,000 aụbọchị, n’agbata calorie dị n’agbata 900 na 1,300kwesịrịsi nakabohaidret. Nke ahụ sụgharịrị ịbụ n'etiti gram 225 na 325 nkekabohaidretkaụbọchị.
Carbs ole ka m choro otu ubochi?
Ntuziaka nduzi nri nke ndị America na-atụ aro nke ahụkabohaidretmee ka pasent 45 ruo 65 nke ngụkọta gịkwa ụbọchịkalori. Yabụ, ọ bụrụ na ị nweta calorie 2,000 aụbọchị, n’agbata calorie dị n’agbata 900 na 1,300kwesịrịsi nakabohaidret. Nke ahụ sụgharịrị ịbụ n'etiti gram 225 na 325 nkekabohaidretkaụbọchị.
Ntuziaka nduzi nri nke ndị America na-atụ aro nke ahụkabohaidretmee ka pasent 45 ruo 65 nke ngụkọta gịkwa ụbọchịkalori. Yabụ, ọ bụrụgịnweta calorie 2,000 aụbọchị, n’agbata calorie dị n’agbata 900 na 1,300kwesịrịsi nakabohaidret. Nke ahụ sụgharịrị ịbụ n'etiti gram 225 na 325 nkekabohaidretkaụbọchị.
Carbs na-eme ka ị buru ibu?
Mee carbohydrates na-eme ka ị na abụba? Nri ọ bụlanwere ike ibute oke ibuọ bụrụgịrie oke. Ma nri gị ọ dị elu naabụbama ọ bụ elu nakabohaidret,gịna-eri oge ike karịa ahụ gị,gị'yiri kanweta ibu. Gram maka gram,carbohydratenwere obere kaloriabụba.
Kedu ihe bụ carbohydrates dị mma kwa ụbọchị?
Usoro nri na-atụ aro ka carbs na-enye pasent 45 ruo 65 nke nri kalori ụbọchị gị. Yabụ ọ bụrụ na ị rie nri kalori 2000, ị kwesịrị ịchọrọihe dịka gram 225 ruo 325nke carbs kwa ụbọchị.
Ego ole ka m kwesiri iji rie nri obula?
Nke ahụ pụtara na ọtụtụ ụmụ nwanyị chọrọ 3 ka 4 carb servings (45-60 grams) kwa nri, ebe ọtụtụ ụmụ nwoke chọrọ ihe dị ka 4 ka 5 carb servings (60-75 gram). Agbanyeghị, ego a dabere na afọ gị, ibu gị, ogo ọrụ gị, yana ọgwụ ndị na-arịa ọrịa shuga. Jide n'aka na gị na onye na-edozi ahụ ga-arụ ọrụ iji dozie ebumnuche carb gị.
Kedu ka esi gbakọọ carbs net maka ụbọchị?
N'ikpeazụ, nkwupụta ụgbụ ụgbụ ahụ bụ na ọ dịghị mkpa ka e nwee ụfọdụ carbs dị ka carbs maka ụbọchị ahụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere grab 40 na iko nke quinoa esiri esi na gram 5 nke eriri. 40 grams ngụkọta carbs - 5 grams eriri = 35 grams net carb.